News – University of Computer Studies (Panglong)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပင်လုံ) ပထမနှစ်သင်တန်းတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြား နေသောကျောင်းသား/သူများ(၂၀၁၉ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်)အားလုံး ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး(တစ်လ ၃၀၀၀၀/-ကျပ်ဖြင့် ၁၀ လ) (၁၅.၈.၂၀၂၀) ရက်နေ့ အထိနောက်ဆုံးထား လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လွှာ ပုံစံအားကျောင်းသားရေးရာဌာတွွင် အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက်။ တက္ကသိုလ်ပညာကို သင်ကြားရန်အချက်အခဲရှိသူ၊ အခက်အခဲရှိသောအခြေအနေချင်းတူလျှင် ပညာတော်သူကိုဦးစားပေးပါမည်။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူပူးတွဲတင်ပြရမည့်အချက်များမှာ- ၁။ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ၊ မိသားစုဓါတ်ပုံနှင့်နေအိမ် ၂။မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ ၃။ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားသော အခြားအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ…
Call for Paper: The Annual University Journal on Research and Applications, 2020, Vol-2, Issue 1
download paper format: https://www.ucspinlon.edu.mm/wp-content/uploads/2020/07/AUJRA-paper-template2020-1.doc
၂၁.၁. ၂၀၂၀ ရက်​နေ့မှ ၂၂.၁. ၂၀၂၀ ရက်​နေ့အထိ Taxila Institute မှ ဆရာ ဦးရဲပြည့်သူ ကျင်းပပြုလုပ်​သော “Intermediate Leadership & Capacity Development – ILCD” Training”
မြန်မာလူငယ် နည်းပညာစွန့်ဦးတီထွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ၂၀၂၀
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) နှင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် “မြန်မာလူငယ် နည်းပညာစွန့်ဦးတီထွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ၂၀၂၀” တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အဖွဲ့များအနေဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၄) ရက် နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်လွှာများကို တင်သွင်းပေးရန် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ချီးမြှင့်မည့်ဆုများ 1. Technopreneurship 2020 Accelerate Award…